Fanadiovana fantsom-bokatra porofo telo an'ny FB tsara indrindra ho an'ny orinasa mpamokatra indostrialy sy orinasa | Marcospa
Ny andiany FB dia manadio vovoka fanamafisana telo ho an'ny indostrian'ny adidy mavesatra
Ny endri-javatra dia fiarovana sy porofo mipoaka, maivana ary mora vidy kokoa noho ireo mpanadio banga indostrialy mavesatra. Izy io dia mety amin'ny fiasa mitohy amin'ny faritra misy porofo mipoaka sy vovoka na fitaovana mitrandrahana mora mirehitra sy mipoaka. Ampiasaina be amin'ny fanodinana vy, fanodinana plastika, bateria, fanariana, elektronika, fanontana 3D ary indostria hafa.
Famaritana an'ity andiany FB andiany telo ity
Parameter amin'ity andiany FB tsara indrindra dingana telo ity ny varotra madio fanadiovan-tena
1. Moto-porofo mipoaka, misoroka alo-by elektrika
Ny rafitra herinaratra dia mandray ny fanamafisam-peo fanamafisam-peo fanamafisam-peo avo lenta (paompin-drivotra), fatran-tsetroka avo roa heny, fahamendrehana avo lenta, tabataba ambany, fiainana lava ary fikirizana maharitra mandritra ny 24 ora. Misy herinaratra manomboka amin'ny 0.25kw ka hatramin'ny 4.0kw, ny famatsiana herinaratra dia 380V / 50Hz.
môtô-porofo mipoaka: Ex d Ⅱ BT4 Gb
2. Sivana fanoherana ny static mba hisorohana ny loza mety hitranga
Kitapo kintana sy sivana kapila azo ampiasaina amin'ny rafitra filtration.
Ny sivana kitapom-borona dia mampiasa fahatsapana mifangaro antistatika mba hanatsarana ny fitarihana amin'ny alàlan'ny fanampiana kofehy binary.
Ny sivana cartridge sivana dia tsaboina amin'ny fonosana vita amin'ny aluminized, izay manana fahombiazana tsara antistatika sy fanoherana ny surface105Ω.
3. boaty elektrika tsy misy fipoahana hisorohana ny loza ateraky ny herinaratra
Ny rafitra fanaraha-maso dia mandray boaty elektrika misy fipoahana, contactor AC anatiny ary fampiasa amin'ny hafanana tafahoatra mampiasa singa Schneider elektrika.
boaty herinaratra-porofo, marika-porofo mipoaka: Ex d II BT4
4. Fanaraha-maso ny tsindry ratsy, fampahatsiahivana amin'ny fanadiovana
Ny refin'ny tsindry ratsy dia ny singa fanamafisana mahazatra an'ny masinina manontolo. Izy io dia natao manokana ho an'ny mpanadio banga indostrialy nataon'i Puhua. Ny maitso, manga ary mena dia mifanaraka amin'ny tsindry ratsy atin'ny milina ao amin'ny faritra angovo tsirairay. Ny tondro dia manondro ny faritra mena hanehoana ny sivana dia mila diovina na soloina.
5. Casters indostrialy, mora ny mihetsika caster Industrial mora apetraka.
Ny kodiarana dia vita amin'ny polyurethane (PU) ambaratonga ambony, ny takelaka dia vita amin'ny takelaka pickling 2.5mm hampitombo ny taolan-tehezana, ary ny casters 2-inch dia afaka mitondra 50kg tsirairay. Ny velaran'ny kodiarana dia natao miaraka amin'ny voam-bary hanatsarana ny fahombiazan'ny anti-slip.
6.Saharo ny barila ambony sy ambany, mora diovina Ny firafitry ny fisarahana barika ambony sy ambany dia ny fanaingoana mahazatra ny masinina, izay mitondra ny tena mahasalama ny mpampiasa. Mety ny manadio ny vovoka. Rehefa ilaina ny manadio ny vovoka, mila manainga ny bara fanerena fotsiny, latsaka amin'ny tany ny barika manangona vovoka, ary mamindra ny barika., Atsipazo ny vovoka ary tsindrio ny bara fanerena rehefa vita.
7. Cyclone ao anaty mba hampihenana ny enta-mavesatra amin'ny sivana Ny firafitry ny rivodoza anatiny dia ny fanaingoana mahazatra ny masinina. Izy io dia apetraka amin'ny fifandraisana amin'ny seranan-tsofina. Ny poti lehibe dia azo apetraka mivantana eo ambanin'ny siny manangona vovoka amin'ny alàlan'ny Separator Separator. Tsy mila sakanana sy voafandriky ny sivana izy io, izay mety hampitombo ny ain'ny sivana.
8. Fifanarahana sy fantsom-panafody anti-static Ny fantsom-pifandraisana sy ny mpampitohy dia vita amin'ny fitaovana anti-static, ny fitaritana herinaratra dia mifanaraka amin'ny DIN53482, ary ny fanoherana ambonin'ny tany dia <106Ω.
9. Ny sivana dia mihodina mihodina mba hanadio ny vovoka, izay mety sy mahomby. Ny fanadiovana vovoka mihodina dia mandray ny maody amin'ny tanana. Mila mihodina ny fihodinam-bokatra mihodina amin'ny famantaranandro / amin'ny famantaranandro mandritra ny 1 minitra fotsiny ianao hanadiovana ireo vovoka lehibe amin'ny vovoka miraikitra amin'ny tampon'ny sivana.
MODELY FB-22 FB-40
Hery （Kw） 2.2 4
TOSIKARATRA （V / Hz） 380/50 ~ 60
Tabilao Tank L） 60
Tabataba dB （A） 72 ± 2 74 ± 2
Savaivony inhalation （mm） 50
Faritra sivana （m2） 3.5
Fahafahana sivana Sivana fanoherana ny statika （0.3μm ＞ 99.5%）
Fanadiovana sivana ahodin-tanana
Refy （mm） 1220 * 565 * 1270
Milanja （kg） 105 135
Teo aloha: A9 andiam-pitrandrahana vovoka indostrialy andian-tsarimihetsika mavesatra adidy mavesatra indostrialy
Manaraka: P3 andian-dahatsoratra bateria mandeha ho azy cordless madio indostrialy
Modely isan-karazany Workshop Pre Separator milina ma ...
P3 andian-bateria Powered Cordless indostrialy v ...